Mpanamboatra bisikileta tsara indrindra (bisikileta azo avy amin'ny sela) Wanhoo
Bisikileta amin'ny sela
Afaka mihazakazaka 150 kilometatra ny bisikiletanay. Milanja 29 kg ny bisikileta, ary manakaiky ny 7 kg ny rafi-heriny hidrôzenina, izay mitovy amin'ny lanjan'ireo bateria miaraka amina fahaiza-manao mitovy. Antenaina fa ho maivana ny maodely manaraka, izay mety hahatratra 25 kg, ary maharitra kokoa.
"Ny tombony azo avy amin'ny teknolojia hidrôzenina dia raha mbola ampidirina ao anaty rafitra ny hidrogen 600 g dia azo atao ny mampitombo ny angovo azo 30%," hoy ny orinasa. Ho an'ny bisikileta E, ny hery mitovy amin'izany dia mila bateria 2 kg fanampiny. "
Ity karazana bisikileta cell fuel ity dia tsy miankina amin'ny batterie hiteraka herinaratra, fa mampiasa hidrogen mba hanomezana herinaratra. Toa bisikileta io, fa ny kodiarany sy ny andry eo aloha kosa malalaka sy milamina kokoa noho ny bisikileta mahazatra. Ary misy varingarina hidrozenina roa litatra miafina eo alohan'ny fiara, izay loharano azo avy amin'ny herinaratra ihany koa.
Raha mbola feno hidrôzena izy dia afaka mandeha ho azy toy ny fiara elektrika, ary lava be ny elanelany. Amin'ny ankapobeny, ny can of hydrogen dia afaka mihazakazaka maherin'ny 100 kilometatra. Miorina amin'ny vidin'ny hidrogen ankehitriny, 1,4 $ dia ampy. Midika izany fa 0,014 USD isaky ny kilometatra fotsiny no ampy, izay mahomby kokoa noho ny fiara elektrika.
Fanampin'izany, tsara ny manamarika fa ity karazana herinaratra hydrogen angovo ity dia sariaka kokoa amin'ny tontolo iainana, ary haingana ihany koa ny hafainganam-pandehany, ary tsy dia misy fetra loatra rehefa mitondra fiara eny an-dalana, noho izany dia fomba fitaterana tena tsara izany.
Ny hidrogen ampiasaina amin'ny bisikileta dia "maintso" satria azo avy amin'ny alàlan'ny herinaratra amin'ny angovo azo havaozina. "Bateria lithium 7 kg miaraka amina metaly 5-6 kg isan-karazany," hoy ilay olona. Ary ny sela solika dia tsy manana afa-tsy platinum 0,3g, ho fanampin'izany dia tsy mifangaro amin'ny metaly hafa izy, ary ny tahan'ny fanarenana dia mahatratra 90%. "
Ary ny sela misy solika dia mbola azo ampiasaina 15-20 taona aty aoriana. Tao anatin'ny 15 taona, ny fahombiazan'ny sela solika dia tsy ho tsara toa ny teo aloha intsony, fa azo ampiasaina amin'ny tanjona hafa, toy ny «generator» «Ireo génératera ireo dia ampiasaina hampiasana solosaina finday, ka dia tsy dia mampiasa herinaratra firy izy ireo. "
Teo aloha: Carbon Fiber Cylinder-Hydrogen Energy
Manaraka: Sela solika hidrogen (sela elektrokimika)